Ny CDC dia namoaka torolàlana maika momba ny Pfizer na Moderna Booster Shots ho an'ny Amerikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny CDC dia namoaka torolàlana maika momba ny Pfizer na Moderna Booster Shots ho an'ny Amerikanina
Ny syringes misy fatra amin'ny vaksinin'ny Pfizer COVID-19, dia aseho eo akaikin'ny karatra fanaovana vaksiny, ny sabotsy 13 martsa 2021, tamin'ny andro voalohany niasana tao amin'ny toerana fanaovana vaksiny faobe ao amin'ny Lumen Field Events Center any Seattle, izay mifanila amin'ny saha izay ny baolina kitra NFL Seattle Seahawks sy ny baolina kitra MLS Seattle Sounders no milalao ny lalaony. Ny tranokala, izay toerana fanaovana vaksiny sivily lehibe indrindra ao amin'ny firenena, dia tsy hiasa afa-tsy andro vitsivitsy isan-kerinandro mandra-pahazoan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny tanàna sy ny distrika ny fatrany bebe kokoa amin'ny vaksiny. (Sary AP/Ted S. Warren)
Ny tolo-kevitra ofisialy hoe iza ary rahoviana no hahazo tifitra fanamafisam-peo COVID-19 dia navoaka tamin'ny Amerikanina androany avy amin'ny Centers for Control Disease and Prevention (CDC).
Tolo-kevitra CDC vaovao ho an'ny tifitra fanamafisam-peo Covid any Etazonia
Androany, ny talen'ny CDC Rochelle P. Walensky, MD, MPH, dia nanohana ny tolo-kevitry ny Komitin'ny Mpanolo-tsaina CDC momba ny fomba fanao amin'ny vaksiny (ACIP) ho an'ny tifitra fanamafisam-peo amin'ny vaksiny COVID-19 amin'ny mponina sasany. ny Fanomezan-dàlana avy amin'ny Food and Drug Administration (FDA). ary ny tolo-kevitry ny CDC hampiasaina dia dingana manandanja rehefa miasa izahay hijanona eo alohan'ilay virus ary hitazona ny Amerikanina ho voaro.
Ho an'ny olona nahazo vaksiny Pfizer-BioNTech na Moderna COVID-19, ireto vondrona manaraka ireto dia azo atao ny fitifirana booster mandritra ny 6 volana na mihoatra aorian'ny andiany voalohany:
18+ taona miasa na mipetraka fikirana atahorana mafy
Ho an'ireo olona efa ho 15 tapitrisa nahazo ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19, ny tifitra booster dia atolotra ihany koa ho an'ireo izay 18 taona no ho miakatra ary efa nanao vaksiny roa volana na mihoatra.
Misy izao ny tolo-kevitra momba ny famporisihana ireo vaksinin'ny COVID-19 telo any Etazonia. Ny olona mendrika dia afaka misafidy izay vaksiny azony ho fatran'ny booster. Ny olona sasany dia mety manana safidy amin'ny karazana vaksiny izay azony tany am-boalohany ary ny hafa, mety aleony mahazo booster hafa. Ny tolo-kevitr'i CDC dia mamela an'ity karazana fangaro sy lalao ity ho an'ny tifitra famporisihana.
Olona an-tapitrisa no vao afaka mahazo tifitra booster ary hahazo fiarovana fanampiny. Na izany aza, ny hetsika amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hanelingelina ny asa goavana amin'ny fiantohana fa ny olona tsy vita vaksiny dia handray ny dingana voalohany ary hahazo vaksiny COVID-19 voalohany. Amerikanina maherin'ny 65 tapitrisa no mijanona tsy voamarina, mamela ny tenany - sy ny zanany, ny fianakaviany, ny havany ary ny vondrom-piarahamonina– marefo.
Ny angona misy amin'izao fotoana izao dia mampiseho fa ny telo amin'ireo Vaksinin'ny COVID-19 nankatoavina na nahazo alàlana tany Etazonia tohizo mahomby amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretina mafy, fampidirana hopitaly ary fahafatesana, eny fa na dia manohitra ireo miely patrana aza Delta variana. Ny fanaovana vaksiny dia mijanona ho fomba tsara indrindra hiarovana ny tenanao sy hampihenana ny fihanaky ny viriosy ary hanampy amin'ny fisorohana ireo karazana vaovao tsy hipoitra.
Ity manaraka ity dia avy amin'i Dr. Walensky:
“Ireo tolo-kevitra ireo dia ohatra iray hafa amin'ny fanoloran-tenantsika lehibe hiaro olona betsaka araka izay azo atao amin'ny COVID-19. Ny porofo dia mampiseho fa ny vaksiny COVID-19 telo nahazo alalana any Etazonia dia azo antoka - araka ny asehon'ny fatran'ny vaksiny mihoatra ny 400 tapitrisa efa nomena. Ary, izy rehetra dia tena mahomby amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretina mafy, ny hopitaly ary ny fahafatesana, na dia ao anatin'ny variana Delta miparitaka be aza.